Momba anay | Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd.
Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd. dia mpamatsy mpandray anjara mavitrika amin'ny sehatry ny haingon-trano Krismasy nandritra ny 10 taona mahery, izay manana ny ozininy any Xiamen City, faritanin'i Fujian China.
Ny lalam-pamokarana lehibe indrindra dia misy ireo sarivongana krismasy, fehiloha krismasy sy voninkazo, resina ary nutcrackers vita amin'ny hazo, sarivongana Santa Claus, saribakoly krismasy, boaty mozika krismasy, haingon-damosina resin-drano sy fihodinana rano sns.
Ny tsenanay lehibe dia i Amerika Avaratra, Eropa Andrefana, Azia atsimo atsinanana, Rosia ary Aostralia.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipa matihanina dia manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana ny vokatra sy ny famokarana ka hatramin'ny fanaterana.
Ny programa anay dia fanao voalohany, ary ny kalitao aloha.
Nahatratra ny BSCI Audit ho an'ny orinasanay izahay, ary ny vokatra rehetra dia hamafisina amin'ny mpanjifa alohan'ny hamokarana, ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia manaraka tsara ny fenitra, ary ny fizahana tanteraka alohan'ny hamonosana.
Ny vokatra rehetra dia halefa amin'ny fitsapana kalitao, mari-pankasitrahana mifandraika ary tatitra momba ny fitsapana no homena.
Ny fahaizanay mivoatra amin'ny vokatra matanjaka mifototra amin'ny endrika tsara sy ny mpiasa mazoto maherin'ny 100; izahay dia mamorona entana vaovao arakaraka ny fironana amin'ny tsena isaky ny telovolana, ary misy ny fanangonana betsaka ho an'ny safidinao.
Nandray anjara tamina fampirantiana marobe an-trano sy an-tsambo isan-taona izahay, afaka mahita ny ankamaroan'ny hevitra nalaza niaraka taminay ianao.
Miaraha miasa aminay, hankafy ny serivisy Fividianana ONE-STOP izahay.
Mandresy ianao ary mandresy izahay no teny filamatray
Tongasoa eto hifandray aminay, ary manantena ny fitsidihanao sy ny fotoana maharitra fiaraha-miasa aminay.